Psalms – Akhbaarta Wanaagsan
All resources / Kitaabka Quduuska Ah / Maqal / Psalms
Anigu Rabbigaan isku halleeyaa, Haddaba idinku sidee baad naftayda ugu tidhaahdaan, Sida shimbir oo kale buurtiinnii ku carara? Waayo, bal eega, kuwa sharka lahu waxay xoodaan qaansada, Fallaadhoodana waxay ku …
Sabuuraad Cutubka 10aad
1Rabbiyow, maxaad meesha fog u istaagtay? Oo maxaad u dhuumataa markii dhibaato jirto? 2Kii shar leh oo kibir badan ayaa miskiinka si kulul u eryada, Xeeladdii ay hindiseen iyaga ha la …
Duco / Gabay / Kitaabka Quduuska Ah / Maqal / Psalms
sabuuraad cutubka 9aad
sabuuraad cutubka 8aad 1 Qalbigayga oo dhan ayaan Rabbiga ugu mahadnaqi doonaa, Waxaan muujin doonaa shuqulladaada yaabka leh oo dhan. 2 Waan kugu farxi doonaa oo kugu rayrayn doonaa, Kaaga ah kan …
Duco / Kitaabka Quduuska Ah / Maqal / Psalms
sabuuraad cutubka 8aad
sabuuraad cutubka 8aad 1 Rabbiyow, Sayidkayagiiyow, Magacaagu dunida oo dhan ku fiicanaa! Waayo, sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka. 2 Waxaad xoog u yeeshay afka ilmaha yaryar iyo caanonuugga, Waana cadaawayaashaada daraaddood, Si …
sabuuraad cutubka 7aad
sabuuraad cutubka 7aad Kanu waa sabuur Shiggayoon ah oo Daa’uud Rabbiga ugu gabyay, oo ku saabsan Kuush oo ahaa reer Benyaamiin. 1 Rabbiyow, Ilaahayow, adigaan isku kaa halleeyaa, Haddaba iga …
Kitaabka Quduuska Ah / Psalms
SABUURAAD CUTUBKA 6AAD
sabuuraad cutubka 6aad Kanu waa sabuur Daa’uud u tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo waxaa lagu qaadaa alaab xadhko leh oo muusiko ah, oo Shemiiniid lagu luuqeeyo. 1 Rabbiyow, cadhadaada ha igu …
Duco / Kitaabka Quduuska Ah / Maqal / Psalms / Qoraal
SABUURAAD CUTUBKA 5AAD
SABUURAAD CUTUBKA 5AAD Kanu waa sabuur Daa’uud u tiriyey madaxdii muusikaystayaasha, oo waxaa lagu qaadaa alaab la afuufo oo muusika ah. Rabbiyow, bal hadalladayda dhegta u dhig, Oo ka fiirso …
1 Ilaaha xaqnimadaydow, markii aan ku baryo i maqal, Markii aan cidhiidhi ku jirayba meel baad ii bannaysay, Ii naxariiso oo baryadayda maqal. 2 Binu-aadmigow, ilaa goormaa sharaftaydu sharafjab u rogmanaysaa? Ilaa …
1 Rabbiyow, cadaawayaashaydu fara badanaa! Kuwa igu kacaa aad bay u badan yihiin. 2 Way badan yihiin kuwa naftayda wax ka sheegaa, iyagoo leh, Ilaah isaga caawin maayo. (Selaah) 3 Laakiinse, Rabbiyow, adigu …
1 Bal quruumuhu maxay u cadhoodaan, Dadkuna maxay ugu fikiraan wax aan waxba ahayn? 2 Boqorrada dhulku col bay u taagan yihiin, Taliyayaashuna waxay u wada tashadaan Rabbiga iyo Masiixiisa, iyagoo leh, …
Copyright © 2020 Akhbaarta Wanaagsan	– OnePress theme by FameThemes